Zvekare 2 mwedzi yemahara yeApple Music nekuda kweShazam | IPhone nhau
Zvekare 2 mwedzi yemahara yeApple Music yekutenda kuna Shazam
Zvekare, kukwidziridzwa kwaShazam kuti uwane Apple Music mahara kwechinguva kunoitirwa vese vashandisi veApple vane app yakaiswa pamakomputa avo. Mune ino kesi (inenge mune yangu yangu) chishandiso chinokwanisa kuona uye kuona nziyo dziri kutamba uye kugovera ivo zvakananga mukushambadzira mimhanzi sevhisi, ikozvino ipa mwedzi miviri yeApple Music.
Zvine musoro Uku kukwidziridzwa kunoshanda kune avo vashandisi vakatonakidzwa nebasa remahara kare, uye kwandiri ini handina Apple Music yekubhadhara account uye kare ndakanga ndatonakidzwa nekusimudzira kwakafanana neiyi. Chero zvazvingava, ini ndinofungidzira kuti avo vakabhadhara iyo Apple Music sevhisi vanogona kupihwa kuderedzwa maererano nemwedzi yemahara.
Maitiro ekutora iyi mwedzi miviri yeApple Music mahara
Kuva neApple account ndiyo yekutanga mamiriro ekutora ichi chipo chemwedzi miviri yeApple Music pa iPhone, iPad kana Mac yako.Kunze kweizvi, zviri pachena kuti isu tinofanirwa kuisa Shazam application pa iPhone yedu. Ichi chishandiso chemahara zvachose muApp Store uye iwe unogona kuidhawunirodha chero nguva, izvo zvatisingavimbise kuti kukwidziridzwa kuchashanda kune vashandisi vatsva (unototisimbisa mune zvakataurwa) vanoidhawunirodha izvozvi.
Kana tangove neapp yakaiswa pa iPhone yedu tinongofanira kuiwana uye kutevedzera matanho anooneka pazasi. Panyaya iyi tinofanira chete simbisa kutenga nepassword yedu yeApple ID uye wapedza. Iyo meseji yatinayo kukwidziridzwa kunoshanda inobuda yega. Vamwe vashandisi vasina kumboshandisa sevhisi iyi vanogona kukwira kusvika kumwedzi mishanu yeApple Music mahara.
Rangarira kuti isu tinokwanisa kugara takadzima kunyoreswa kusati kwaitwa kuvandudzwa. Zvakare tinogona kukanzura kuzvinyoresa ipapo toramba tichinakidzwa nebasa racho saka hatifanirwe kurangarira kana kusimudzirwa kwapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Zvekare 2 mwedzi yemahara yeApple Music yekutenda kuna Shazam
Otto Ponce akadaro
Izvo hazvinditenderi kuti ndiishandise, inonditora kune yekusimbisa skrini ine Face id, kana ichisimbisa inondipa meseji yekukanganisa inoti "iyo kodhi inongoshanda muchitoro cheTunes muUSA." Handizivi kuti ndoona sei kuti Shazam yangu yakaiswa munyika ipi kana kuti ndoichinja sei.
Pindura kuna Otto Ponce
Aya ndiwo mashandiro anoita Apple Music Voice, chirongwa chitsva che € 4,99 chete
Iyo App Store inotyora rekodhi yegore rekutengesa